मार्च २०२२ मा किन्नका लागि शीर्ष १० सस्तो क्रिप्टोकरन्सीहरू: Dogecoin, Tether, र थप - Shiv's Era
मार्च २०२२ मा किन्नका लागि शीर्ष १० सस्तो क्रिप्टोकरन्सीहरू: Dogecoin, Tether, र थप
1. माथिल्लो तल्लामा आउँदै गरेको क्रिप्टोकरेन्सीमा जानुहोस् 2. मुद्रास्फीति प्रतिरोधी मुद्रामा लगानी गर्नुहोस् 3. अन्य क्रिप्टोकरन्सीहरूमा अत्यधिक अस्थिरताबाट बच्नुहोस् 4. Dogecoin को लोकप्रियताको फाइदा लिनुहोस्
मार्च २०२२ मा सात सबैभन्दा आशाजनक सस्तो क्रिप्टोकरेन्सीहरू
लगानीले वर्तमान र भविष्यको वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ। यसले तपाईंलाई आफ्नो सम्पत्ति बढाउन र एकै समयमा मुद्रास्फीति-पिटाइ रिटर्न उत्पन्न गर्न अनुमति दिन्छ। यहाँ मार्च 2022 मा किन्नको लागि शीर्ष 10 सस्तो क्रिप्टोकरन्सीहरू छन्।
USDC सबैभन्दा किफायती क्रिप्टोकरन्सीहरू मध्ये एक हो। USDC जेनरको लागि उत्तम सम्पत्ति होइन
USD Coin खरिद गर्नको लागि सबैभन्दा किफायती क्रिप्टोकरन्सीहरू मध्ये एक हो। USDC पुँजीगत लाभ उत्पन्न गर्नको लागि उत्तम सम्पत्ति होइन।
सिल्भर लाइनिंग: XRP बढ्दै छ, तर तपाईंले लगानी गर्नुपर्छ?
XRP मार्च 2022 मा किन्नको लागि सबैभन्दा सस्तो क्रिप्टोकरन्सीहरू मध्ये एक हो। हालको मूल्य: US$0.7198।
Cardano: त्यहाँ बाहिर सबैभन्दा अन्डररेट गरिएको क्रिप्टोकरेन्सीहरू मध्ये एक?
Cardano (ADA) ले लगानीकर्ताहरूको एक विस्तृत दायरालाई आकर्षित गरेको छ, यसको ठूलो बजार लाभ र यसको ऊर्जा-कुशल प्रक्रियाको कारण, जुन Bitcoin को मनपर्ने भन्दा धेरै पर्यावरण-मैत्रीको रूपमा देखिन्छ। Cardano निकट भविष्यमा संस्थागत अपनाउने सर्कलमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Dogecoin के हो? लोकप्रिय क्रिप्टोकरन्सीको परिचय
Dogecoin ले एक प्रमाण-कार्य-सहमति संयन्त्र प्रयोग गर्दछ, जसमा खानीहरूलाई महँगो, उच्च-शक्तिशाली कम्प्युटरहरूसँग जटिल गणित समस्याहरू समाधान गर्न लेनदेन मान्य गर्ने अधिकार प्राप्त गर्न आवश्यक छ। Bitcoin मा यसको फाइदा यो सस्तो र लेनदेन प्रक्रिया छिटो छ।
भविष्यको मुद्राको लागि शिबा इनु किन्दै
शिबा इनु मार्च २०२२ मा किन्नका लागि उत्कृष्ट क्रिप्टोकरन्सीहरू मध्ये एक हो। हालको मूल्य: US$0.0000236।
यहाँ एउटा क्रिप्टोकरेन्सी छ जुन मार्च २०२२ मा राम्रो खरिद हुन सक्छ।
टिथर मार्च २०२२ मा किन्नको लागि सबैभन्दा सस्तो क्रिप्टोकरन्सीहरू मध्ये एक हो। हालको मूल्य: US$1.00।
Bitgetit: BGB टोकन एक सरल, सुरक्षित र शक्तिशाली क्रिप्टोकरेन्सी
BGB (Bitget Token) Bitget को अपग्रेड गरिएको प्लेटफर्म टोकन हो। यो धेरै भविष्य सम्भाव्यताहरु संग सबै भन्दा किफायती cryptocurrencies मध्ये एक हो। हालको मूल्य: US$0.1435।
किन DAI भविष्यको Stablecoin हो
DAI एक Ethereum-आधारित stablecoin (स्थिर-मूल्य क्रिप्टोकरेन्सी) हो जसको जारी र विकास निर्माता प्रोटोकल र MakerDAO विकेन्द्रीकृत स्वायत्त संस्था द्वारा व्यवस्थित गरिन्छ। DAI को स्थिर मूल्य US$0.9997 छ। MakerDAI एक प्रकारको कम्पनी हो जुन स्मार्ट अनुबंधहरूको प्रयोग मार्फत चल्छ।
एल्गोरन्ड: एक विकेन्द्रीकृत ब्लकचेन-आधारित नेटवर्क जुन सुरक्षित, स्केलेबल र कुशल छ।
एल्गोरन्ड एक आत्मनिर्भर, विकेन्द्रीकृत, ब्लकचेन-आधारित नेटवर्क हो जसले अनुप्रयोगहरूको विस्तृत श्रृंखलालाई समर्थन गर्दछ। यी प्रणालीहरू सुरक्षित, मापनयोग्य, र कुशल छन् जुन वास्तविक संसारमा प्रभावकारी अनुप्रयोगको लागि महत्वपूर्ण गुणहरू हुन्।
स्टेलर हालका वर्षहरूमा सबैभन्दा सफल Altcoin लगानी मध्ये एक हो
स्टेलर विगत पाँच वर्षमा US$ 1 बिलियन भन्दा बढीको मार्केट क्यापको साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने altcoins मध्ये एक हो। हालको मूल्य: US$0.1796।